Resaky ny mpitsimpona akotry : aza tezitra fa tsy somonga | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : aza tezitra fa tsy somonga
Ny tompon’andraikitra ambony eto amin’ny tany sy ny fanjakana matetika dia tsy mahatanty tsikera. Maro loatra angamba ny mpitaty ran-kena izay manantena ranondranony manodidina azy ireo ka lasa fandokadokafana no mahazatra azy. Izany dia tsapa fa lasa fanao any an-tampony any ary tazana koa na aty ifotony aza eo anilan’olona tompom-pahefana eo amin’ny sehatra iadidiany. Mivonto mihitsy ny lohan’ny sasantsasany, vetivety dia mihevitra ny tenany ho fanaperana raha mbola tsy eo anoloan’ny mena ambonin’ny mena. Rehefa izay anefa no miseho dia lasa izy ireo indray no misoleladelaka ary indraindray ilay be feo mpingerongerona any aminy no iny mandadilady manolo-tena malefadefaka ho irakiraka. Io fitiavan-toerana saosy fahefana io no matetika mandifitra ny fitiavan-tanindrazana ambaraina ombieniombieny. Marina fa misy filaharana ny rafitra eo amin’ny fitantanana ny raharaham-bahoaka, ary ny fehezina no mipao-tsatroka ny eo amboniny, nefa izany tsy manala ny adidin’ny sefo hamaly am-panajana ny olona eo ambany fifehezany. Na any amin’ny sehatra tsy miankina aza dia ahitana anefa indraindray ny fiavonavonan’ireo sefo-be na sefo-kely izay tsy mamaly fiarahaban’ny madinika modimodiany tsy hita fa bitika loatra eo anoloan’ny haja sy fahefany. Mety hanam-pahaizana izy ireny eo amin’ny sehatra sahaniny nefa feno-tapany ka mikobana. Tsy ireny olona ireny no afaka ho lazaina hoe olona andrim-pirenena.
Na eo aza izany, sarotra no hitsara ambony ihany, mavesatra ny fitondrana, misy ny safidy tsy maintsy atao, tokana ny tena eo amin’ny fanapahana farany, tompon’antoka tokana ny tena amin’izany, ny vahoaka no voalohany iantefan’ny vokatra na nety na tsia. Noho izany dia tsy manana fotoana firy ny tompon’andraikitra fa maika lava eo amin’ny fifaneraserana ary tsy tokony handany andro anambitamby ny rehetra, ny vahoaka anie tsy ireo mpanatokatona ireo, fa ny valalabe tsy mandady harona izay miandry eny lavitra. Izay tsapany manefa ny adidy noraisiny no mamy hoditra aminy fa tsy ireo mamahana tantely kabary fotsiny.
Ny tena mahalasa saina dia ny fahaizan’ny tompom-panapahana farany ny tena tranga eto amin’ny fiarahamonina, maro loatra ireo mamahan-dalitra mikasika ny tena zava-misy. Sarotra ho azy ireo no mifantina ny marina rakotry ny fanatsarana fotsiny ny tarehin’ny raharaha mivilambilana.